Labo magaalo oo Maraykanka ku taala ayaa isku haysta koox isboorti ah oo go'aansatay in ay ka guurto magaaladii ay magaceed wadatay ! - BBC News Somali
Labo magaalo oo Maraykanka ku taala ayaa isku haysta koox isboorti ah oo go'aansatay in ay ka guurto magaaladii ay magaceed wadatay !
Lahaanshaha sawirka Morgan Hughes
Markii koox ka tirsan kooxaha ciyaara kubbadda cagta in ay saldhigeeda u wareejiso magaalo kale, taageerayaasheeda ayaa arrinkaas aad uga hor yimid inkasta oo digaroshada ay iska caadi tahay guud ahaan Maraykanka.
Kooxdan ayaa lagu magacaabaa Colombus Crew SC , waxayna doonaysaa in ay u guurto magaalada Austin oo qiyaastii 1,000 mile u jirta meeshan.
Taageerayaasha reer Columbus oo tallaabadan ka xun ayaa dacwad geeyay maxkamadda, taas oo ay uga soo horjeedaan waxa dhacay.
Image caption Columbus
Image caption Austin
Waxa ay kooxdan soo shaacbaxday sanadkii 1994-tii, wixii markaas ka dambeeyayna waxa ay ku caanbaxday in aysan ahayn kooxaha lacagta badan raadiya, wax kastana ku qiimeeya qiimaha lacagta.
Magaalada Austin waxa ay ka mid tahay magaalooyinka aadka u kobcaya ee Maraykanka, waxaana ku nool wax ka badan 2 milyan oo qof.
Waxa ay sidoo kale tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Maraykanka oo aanan lahayn koox magaceeda ku ciyaarta, taas oo ah sababta maamulayaasha kooxdan ay u doorbidayaan in ay halkaas ugu wareegaan.
Image caption Kooxda waxa ay ku ciyaartaa garoon gaboow ah
"Kuma guuldaraysan doono dagaalkan " ayuu yiri Morgan Hughes oo ka mid ah taageerayaasha kooxda, kuwaas oo bilaabay olole la magacbaxay Badbaadinta Kooxda Crew.
Caadi ahaan taageerayaasha isboortiga Maraykanka dhib badan kama qabaan in kooxdooda ay magaalo kale u guurto, haddii ay samaynayo dhaqaale wanaagsan.
Dalka Ingiriiska haddii koox magaalo kale u guurto waxaa ka dhasha buuq aad u badan sidii dhacday sanadkii 2003-dii markii kooxda Wimbledon ay u guurtay magaalada Milton Keynes.
Image caption Taageerayaasha Wimbledon
Dhaqanka dadka Maraykanka ayaa ka mid tahay hayaanka joogtada ah, laga bilaabo ardayda ka yimid magaalooyinka yaryar ee magaalooyinka waaweyn mustaqbalka ifaya usoo raadsanaya illaa kooxaha magaalooyinka badalanaya.
Tusaale kooxda Rams ayaa ka guurtay magaalada St Louis, degtayna magaalada Los Angels, kooxda Chargers waxa ay ka guurtay San Diego, una guurtay Los Angles, halka kooxda Raiders ay ka guurtay magaalada Oakland , degtayna Las Vegas.
Kooxda kubbada shabaqada ee Supersonis, waxa ay ka guurtay magaalada Seattle, waxayna degtay magaalada Oklahoma City, waxayna magaceeda u badashay Thunder.
Intii kooxdan Crew ay joogtay Columbus waxaa soo food saaray hoos u dhac ku yimid daawadayaasha, inkasta oo maamulayaasha kooxda ay dadaal badan sameeyeen haddane ma jirin wax kasoo reyn ah.
Balse magaalada Austin waxaa u badan dhalinyaro had iyo jeer jecel daawashada ciyaaraha, islamarkaasna qabatimay.
Kooxdan waxa dhaqaalaheeda lagu qiyaasaa $130 milyan oo doolar, waana heerka ugu hoseeya oo koox laga filan karo.
Image caption Dadka reer Columbus ayaa xitaa gidaarada ku xardhay cabashooyinkooda
Image caption Kooxda kubbadda cagta ee Columbus Crew
Kubbadda cagta aad ayaa looga jecelyahay magaalada Austin, balse waxaa jira walwal laga qabo dhibaatada deegaan ee ay la imanayso garoon ciyaaro oo weyn in magaalada laga dhiso, iyada oo xitaa la diiday dhawr qorshe oo garoon lagu dhisayay.
Dacwadda laga gudbiyay kooxdan ayaa waxaa lagu doodayaa in taageerayaashii lacagta bixin jiray lagu abaal dhacay, tahayna in xuquuqdooda la illaaliyo.